The Ab Presents Nepal » एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन सक्छ!
एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन सक्छ!
एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभकाे योग हुनेछ ।एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दु’र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ ।